सेवा अवधि बढाउन सशस्त्रका ६ डीआईजीको लबिङ, सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ? : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैसेवा अवधि बढाउन सशस्त्रका ६ डीआईजीको लबिङ, सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई आएका सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र एक जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सेवा अवधि बढाउने खेलमा लागेका छन् ।
गृहले सेवा अवधि थपे के हन्छ ?
उनीहरूको १८ महिने सेवा अवधि थपिँदा हाल डीआईजी र एसएसपीमा कार्यरत कतिपयले सोही पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । यसले समग्र सशस्त्र प्रहरी अधिकृतमै नैराश्य छाउने देखिन्छ ।